Ubuntu 17.10 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 17.10 yave kuwanikwa
Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeUbuntu yatove pakati pedu uye iine ayo ese nhau. Iyo itsva vhezheni, Ubuntu 17.10, ndiyo yekutanga munguva yakareba yekusiya Kubatana seye desktop huru yekutora Gnome 3 sedesktop yekusarudzika. Kunyangwe, semumapurogiramu apfuura, Ubuntu inogona kushandiswa nechero graphical desktop iri kana isiri mumahofisi epamutemo.
Iyo zvakare ndiyo yekutanga vhezheni ye Ubuntu haisi kutsigira 32-bit mapuratifomu kana inozivikanwawo seX86. Iwo mavhenekeri epamutemo ane 32-bit vhezheni, sezvo ivo pakupedzisira vakasarudza kuenderera nepuratifomu iyi, asi ingangove iri vhezheni yekupedzisira iyo ine rutsigiro urwu.
Gnome yanga isiri iyo chete chinhu chitsva mukati meUbuntu 17.10. Wayland, iyo graphical server iyo yakawanda yekuparadzira iri kutora, yakasarudzwawo naUbuntu kuve kutsiva kweMIR uye Xorg. Iyo kernel yeiyi vhezheni ndeye 4.13, yazvino vhezheni yeLinux kernel. Iyo zvakare ine yazvino vhezheni dzakatsiga dzezvakakurumbira zvirongwa zvinoshandiswa muUbuntu senge Mozilla Firefox, Libreoffice, VLC kana Gimp, pakati pevamwe.
Asi chinonyanya kushamisa ndiyo yakaunzwa vhezheni yeGnome iyo inopa Ubuntu 17.10 inobatsira uye mitsva maficha senge anekarenda ine simba nekuwana yakananga pane desktop, doko nyowani kana mukana wekubvisa mwenje webhuruu kubva kumascreen kuti utarisire kuona kwedu. Vashandisi vekubatana vanozoshamiswa nedzimwe shanduko senge izere-screen kuratidza kwemaapplication, kugona kufambisa windows pakati pematafura, kana kungochinja kwekuvhara, kuwedzera, uye kudzikisa mabhatani.
Iyo Ubuntu 17.10 yekuisa mufananidzo inogona kuwanikwa kubva pane izvi link. Uye kana iwe uchida yepamutemo kuravira, saka tinokuisa iwe izvo zvinongedzo zvevamiririri vakuru vepamutemo:
Mamwe mavhenekeri epamutemo achaburitsa vhezheni yavo inoenderana zvichienderana nenguva ine timu yako yekusimudzira. Zvinoshamisa, Ubuntu Gnome inoenderera seyakavhenekera zviri pamutemo, asi zvinoita zvine musoro izvozvi kuti iyo yepamutemo vhezheni inoshandisa uye ine Gnome sedesktop Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 17.10 yave kuwanikwa
Mumwe munhu anogona kunditsanangurira kuti ungabvisa sei gnome, hainyatsondishandira, ndinoda kuisa xfce
Vicente Vancoco akadaro
sudo apt kuisa xfce4, ichaisa xfce4 uye kubva pakunopinda iwe unotanga ne xfce4, ini ndinokurudzira kuti iwe usabvisa gnome-desktop nekuti mamwe mapakeji anoishandisa iwo kugadzirisa!
Pindura Vicente Vancoco
Speedtest: chishandiso chekuyera netiweki kumhanya kubva kune iyo terminal